Hargeysa: Shir-Doceedyo Siyaasadeed Oo U Burburay Damaca Xirsi ee Murrashaxnimada KULMIYE |
Hargeysa: Shir-Doceedyo Siyaasadeed Oo U Burburay Damaca Xirsi ee Murrashaxnimada KULMIYE
Hargeysa (GNN)- Shir-doceedyo siyaasadeed oo la isugu keenay masuuliyiinta xukuumadda ee beesha bariga Burco ee Madaxweyne Siilaanyo ka soo jeeda, ayaa burburay kadib markii Wasiirka Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan shaaciyey inuu u taagan yahay murrashaxnimada jagada Madaxweynaha ee xisbiga KULMIYE ee Madaxweyne Siilaanyo kadib.
Kulan qado ah oo ay abaabuleen Wasiirka Macdanta Xuseen Cabdi Ducaale iyo xubno qurba-joog ah oo la doonayey in lagu heshiisiiyo Wasiirrada Madaxtooyada iyo Duulista – Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Maxamuud Xaashi Cabdi, kaas oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa maalintii Isniintii, isla markaana ay ka
qaybgaleen xubnaha kale xilalka wasiirrada ka haya xukuumadda oo ay ka mid yihiin; Wasiirka Dib-u-dejinta Cali Siciid Raygal, Wasiiru-dawlaha Waxbarashada Axmed Nuur Faahiye, Wasiir-ku-xigeennada Kalluumaysiga iyo Gaashaandhigga – Maxamed Xaaji Aadan iyo Jaamac Cabdillaahi Biin, ayaa ku dhammaaday is-afgarad la’aan, kadib markii lagu kala qaybsamay aragtida siyaasiyiintan ee mustaqbalka xisbiga KULMIYE iyo doorka ay ku yeelanaan beel ahaan.
Kulankan ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin oo aan saxaafadda loo ogolayn marka laga reebo sawirro ka qaybgalayaasha laga qaaday oo lagu baahiyey qaar ka mid ah shabakadaha wararka internetka.
Haseyeeshee, sida xogo kala duwani u xaqiijiyeen Jamhuuriya xubnaha kulanka ka qaybgalay ayaa labada wasiir ee Madaxtooyada iyo Duulista Hawada ka dhegaystay dooddo la xidhiidha damacooda siyaasadeed, iyadoo Wasiir Xirsi goobta ka shaaciyey inuu diyaar u yahay murrashaxa jagada Madaxweynenimo ee xisbiga KULMIYE kadib Madaxweyne Siilaanyo, isla markaana uu leeyahay awooddeeda iyo kartideedaba, wax u diidayaana aannu jirin.
Sida xogto tilmaantay damaca Wasiir Xirsi ayaa madasha ka abuuray khilaaf hor leh, iyadoo Wasiirka Duulista Maxamuud Xaashi uu ku dooday in aanay siyaasiyiinta ka soo jeeda bariga Burco ee ay isku haybta yihiin Madaxweyne Siilaanyo xaq u lahayn murrashaxnimada jagada Madaxweynaha KULMIYE ee xilligan, gaar ahaan shanta sanno ee soo socda.
Masuuliyiinta iyo xubnaha qurba-joogga ah ee kulankaasi ka qaybgalay ayaa ku kala jabay, isla markaana kala taageeray doodaha Xirsi iyo Maxamuud Xaashi soo bandhigeen, taas oo keentay in kulankaasi ku dhammaado natiijo la’aan aan waxba la isla meeldhigin.
Sidoo kale, shir-doceedyo kale oo daba socday natiijo la’aanta kulankaasi hore oo dhacay shalay ilaa xalay, ayaa la sheegay in aanay midho-dhalin oo mar kale masuuliyiinta iyo xubno kale oo ka soo jeeda deegaanka bariga Burco isku aragti ka noqonwaayeen ajandaha qorshahooda mustaqbalka ee xisbiga KULMIYE.
Dhinaca kale, ilo-wareedyo kala duwan oo wargeyska Jamhuuriya la hadlay, ayaa sheegay in dhawaaqa Wasiir Xirsi ee la xidhiidha damaciisa murrashaxnimada KULMIYE ay saamaysay Madaxtooyada oo laga dareemay dhaqdhaaqyo aan soo dhawayn.
Source:- Wargeyska Jamhuuriya